नक्कलि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सर्बोच्चले गरेको थियो ५ सय जरिवाना ! - Jagaran Online
नक्कलि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सर्बोच्चले गरेको थियो ५ सय जरिवाना !
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०५:१७
दाङ, असोज २३ । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द रिजाल सरुवा भएपछि उनको ठाउमा नया प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोरुपमा जयनारायण आचार्य आउने भएका छन । जुम्ला घर भएका आचार्यलाई नक्कलि शैक्षिक प्रमाण पत्र मुद्धामा बिशेष अदालतले सफाइ दिए पनि सर्बोच्च अदालतले ५ सय रुपैया जरिवाना गरेको थियो । भारतबाट आइएस्सि पास गरेको आचार्यको शैक्षिक प्रमाण पत्र नक्कलि भएको भन्दै मुद्धा चलेको थियो । यो घटना २०७३ सालको हो । हाल आचार्य गृह मन्त्रालयबाट सरुवा भइ दाङ नया प्रमुख जिल्ला अधिकारीकारुपमा आउन लागेका हुन ।
दाङका सबै क्रसर र बालुवा प्रसोधनको अनुगमन सकियो, अहिलेको मापदण्ड अनुसार धेरैजसो अबैध!
कांग्रेस दाङद्वारा बागी उम्मेदवार जाेशी र शर्मालाई साधारण सदस्यता नरहने गरि कारबाहि गर्दै पार्टी निष्काशन
साझालाइ औषधि बिक्रिबितरणमा रोक लगायो